Momba anay - Shandong Huiyang Industry Co., Ltd.
Shandong Huiyang Industry Co., Ltd. dia mpanamboatra mari-pahaizana FSC natsangana tamin'ny taona 2003, indrindra amin'ny fikarohana, fampandrosoana, famokarana, fivarotana sy serivisy karazan-kazo hazo, asa-tanana vita amin'ny hazo, lovia hazo, ravaky ny fialan-tsasatra hazo ary fanaka vita amin'ny hazo. Any Jinan no misy fidirana fitaterana mety. Natokana ho an'ny fifehezana kalitao henjana sy serivisy ho an'ny mpanjifa misaina, ny mpikambanay manana traikefa dia misy foana hiresaka momba ny zavatra takinao sy hahazoana antoka fa fahafaham-po ny mpanjifa.
'' Ny kalitao avo lenta no tadiavinay tsy an-kijanona. Dingana telo amin'ny fizahana kalitao dia afaka manome antoka anao ny vokatra avo lenta sy ny fandefasana haingana amin'ny famokarany avo sy maharitra.
Tao anatin'izay taona vitsivitsy lasa izay, ny orinasanay dia nampiditra andian-fitaovana mandroso ao anatin'izany ny milina fanovozana, ny planer press, ny milina fanaovana poloney kely, ny milina fanoratana, ny milina poloney, ny planeta efatra, ny tsipika roa, ny tsofa maro, ny milina fanjairana, ny milina sokitra laser , Masinina fanapahana taratasy, Masinina fanaovan-gazety hafanana, Masinina mitazona, Masinina fanontana, Masinina fanodinana carton.
Ho fanampin'izay, nahazo mari-pankasitrahana FSC izahay mba hahazoana antoka fa azo arahana daholo ny fitaovanay hazo. Manana EN71, LFGB, CARB koa izahay. Taratasy fanamarinana FDA mba hiantohana fa azo antoka ireo vokatra hazo. Ny vokatra vita amin'ny hazo anay dia amidy tsara eran'i Chine ary aondrana any Amerika Avaratra, Amerika Atsimo, Eropa, atsinanana atsinanana, Azia, Afrika atsimo ary Oseania!
Ny ekipa mpamolavola antsika dia manampy ny mpanjifa hanodina ny hevitra tsara ho lasa asa tanana mazava. Mamolavola sy manao asa tanana lamaody, manintona, samy hafa izahay.
Raisinay koa ny kaomandy OEM sy ODM. Na ny fisafidianana vokatra amin'izao fotoana izao avy amin'ny katalaoginay na ny fikatsahana fanampiana amin'ny injeniera ho an'ny fangatahanao dia azonao atao ny miresaka amin'ny ivon-toeran'ny mpanjifantsika momba ny fepetra takianay.
Izahay dia mitarika orinasa amin'ny asa-tanana vita amin'ny hazo mihoatra ny folo taona. Manome endrika maimaim-poana izahay, fanohanana OEM, MOQ ambany, fandefasana haingana, santionany maimaimpoana ary serivisy ho an'ny varavarana.
Izahay no mpamatsy sy mpiara-miasa anao any Shina amin'ny boaty vita amin'ny hazo sy ny asa tanana. Tongasoa eto hitsidika ny orinasa. Misaotra!